အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အပြာစာပေစွဲမှတ်ခြင်း - အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အစီရင်ခံချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအားစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေ
လူကြီးများအတွက်ညစ်ညမ်းစွဲ: ဆိုချက်နှင့်နားဆင်နိုင်ပါတယ်သက်ရောက်မှု (2016) ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
J ကိုလိင် Med ။ 2016 မေလ;13(5):760-77. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.03.002.
Duffy တစ်ဦးက1, Dawson DL2, Das Nair R ကို3.
ကိုယ်တိုင်လေ့လာသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု (SPPA) သည်သုတေသနနှင့်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုတွင်အယူအဆတစ်ခုအဖြစ်တိုး။ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊ ထိုသို့ဖြစ်လင့်ကစား“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှု” သည်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသောရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သုတေသီများအနေဖြင့်၎င်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သို့မဟုတ်၎င်းတည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုများလည်းရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် SPPA ကိုမည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုကွဲပြားခြားနားသည်၊ ၎င်းသည် SPPA ၏သက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောကောက်ချက်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
ဤသည် SPPA ၏ထင်သက်ရောက်မှုသည်အဘယ်အရာဆန်းစစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဘယ်လိုအယူအဆ operationalized ဖြစ်ပါတယ်။
အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဂျာနယ်ဆောင်းပါးတစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အောက်ပါ databases ကိုနိုဝင်ဘာလ 2015 မှတက်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြသည်: CINAHL (2001-2015), Embase (1974-2015), Medline (1946-2015), PsychARTICLES (1980), နှင့် PsychInfo (1806-2015) ။ အသုံးပြုသောသတ်မှတ်ချက်များကိုညစ်ညမ်း * လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း, SEM, ခေါ်ဆောင်သွား * nonparaphilic, cyberpornography, စှဲလမျးသူ * ပြဿနာ, ပိုလျှံ * compul * impul * သက်ရောက်မှု, effec * နျစှာနထေို * နှင့်အကြောင်းမရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးသက်တမ်းနောက်မှာခရေပွင့ကြောင်းအမြစ်နှင့်အတူစတင်သမျှသောအသုံးအနှုန်းများရှာဖွေရေးတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်ဆိုလိုသည်။
ကျနော်တို့ SPPA အများဆုံးမကြာခဏအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များအဖြစ် operationalized ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်သုတေသီများ SPPA ၏ဆုံးအဖွတျအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သက်ရောက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့တော်မှာ။ SPPA ထိုကဲ့သို့သောအထီးကျန်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအံဝင်ခွင်ကျ၏တိုးမြှင့်ခံစားချက်တွေကိုအဖြစ်အလားတူနည်းလမ်းများအတွက်အသုံးပြုသူများနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုထိခိုက်သတင်းပို့သည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်သောကောက်ချက်များ၏အစွမ်းသတ္တိကိုကန့်သတ်ထားတဲ့မူလတန်းလေ့လာမှုများ, အချို့အတိုင်းအတာများကန့်သတ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကန့်သတ်ကိုယ်စားလှယ်နမူနာများနှင့် SPPA နှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများလုံလောက်မှုမရှိတိုင်းတာ၏မရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
နေဆဲ Self-ရိပ်မိလိင်စွဲလမ်းရာမှအဖြစ်ကွဲပြား SPPA ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် etiology ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိတယ်တည်ရှိ။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, သုတေသနရှုခင်းကွဲပြားခြားနားသောသီအိုရီအမြင်များအားဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်။ အခြားမှသာလွန်အဖြစ်တဦးတည်းသီအိုရီအနေအထားအကြံပြုဖို့သက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲ, Clinician သူတို့ရဲ့သီအိုရီရှုထောင့် (သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘက်လိုက်မှု) နဲ့အညီကြောင်းကုသမှုအကြံပြု၏အန္တရာယ်မှာပေမယ့်တွန်းအားအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တစ်ဦးချင်းကားမောင်းနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဤအတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌, ထိုသုံးသပ်ချက်ကိုအနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
KEYWORDS: စွဲ; definitions; သက်ရောက်မှု; ညစ်ညမ်း; ဆန်းစစ်ခြင်း